Ama-New Media Consultants - Usesho, Komphakathi, Ividiyo kanye Neselula
Abaqhubi Bezokumaketha… badukile .. Ababonisi
NgoMgqibelo, July 3, 2010 NgoLwesine, ngo-Okthoba 29, 2020 Douglas Karr
Lapho ngiqala Highbridge, esinye sezinqumo okufanele sizenze empeleni besingayifaka uphawu lenkampani. Njengoba ngicabanga ngokumaketha kanye nokuziphendukela kwayo, ngivame ukukuqhathanisa nomqhubi kanye ne-symphony. Njengomxhumanisi, ngidinga ukufana nomqhubi, ngisize ukuhlanganisa izindlela ezahlukahlukene futhi ngibasebenzise ukuthola amanothi afanele ngezikhathi ezifanele, ukuze isu ligcwaliseke ngokuphelele.
Bengingafuni age ngokwami ​​ngokuziqamba njengo umxhumanisi wezokukhangisa. Bengingafuni ukukhawulela ngokuzibiza nge umxhumanisi wokusesha or umxhumanisi wezokuxhumana. Lokho kufana nokuthi usho ukuthi ungumdlali we-violinist, i-flautist, noma i-percussionist. Esikhundleni salokho, ngangifuna ukuzenza obala ngokwengeziwe.
Imidiya emisha akusho ukuthi ngiyishaya indiva imidiya yakudala, futhi ayikhawuleli ngokuzayo. Kuyohlale kukhona okuthile okusha. Ukubonisana nabezindaba okusha kungabandakanya ukusesha, ezenhlalo, ividiyo, iselula… noma cishe noma yini eyehlayo. Lokho akusho ukuthi ngizozikhangisa njengochwepheshe kuzo zonke lezo zinkundla. Sengivele ngisebenza namafemu ophathina nama-ejensi agxile kulezo zihloko.
Njengomxhumanisi omusha wezindaba, kubeka okulindelwe engingasiza kukho iyiphi abezindaba… futhi ngifundisa amaklayenti ami ngentuthuko yakamuva kwezindlela zokuxhumana. Futhi ngiyazama ukufunda nokwakha ubuchwepheshe kuzo zonke izitayela ezintsha. Ngezikhathi ezithile, ngiyasho ukuthi mina do ukubonisana nabezindaba zokuxhumana nabantu noma ukusesha okufunwayo… kepha angizenzi uphawu uqobo kulezo zindawo.
Abaqhubi akubona abaculi abangochwepheshe nganoma iyiphi insimbi eyodwa; kodwa-ke, baqonda ngokugcwele ukuthi bangayisebenzisa kanjani insimbi ngayinye, babenze basebenze ndawonye, ​​futhi benze umculo omnandi. Lokhu ukumaketha kwe-orchestration.
Kubi kakhulu ukuthi asizibizanga ngabaqhubi bezimakethi!
Nakhu ukwenza umculo omnandi wokumaketha!
Tags: ibhalansiUmqhubiumxhumanisi wezokukhangisaukubonisana nokumakethaukumaketha kwe-orchestrationUmculoizinsimbi zomculo